MATE: Inona izany ary ahoana ny fametrahana azy amin'ny DEBIAN 10 sy MX-Linux 19? | Avy amin'ny Linux
VADIKO dia hazavana sy feno Tontolo iainana Desktop, momba izay sy itoviana kanelina, matetika tsy dia mamoaka matetika loatra isika, satria antsika lahatsoratra farany manondro momba izany, 3 taona mahery lasa izay.
Azo antoka fa izany dia vokatry ny zava-misy, amin'ny ankapobeny, izy io ihany no resahina Linux Mint na Ubuntu MATE, nanomboka tamin'izay Tontolo iainana Desktop Izy io dia be mpampiasa amin'ny roa Fizarana GNU / Linux. Noho izany, amin'ity boky ity dia hifantoka manokana amin'ny Inona izany? y Ahoana ny fametrahana anao?. Manasongadina, mazava ho azy, ny ankehitriny DEBIAN GNU / Linux-fizarana meta, ao anatin'ny vao haingana indrindra Malagasy Bible, la laharana 10, anarana kaody Buster. Izay koa no fototry ny Distro MX-Linux 19 (Duckling mahatsiravina).
Manonona ny tranokalany ofisialy, MATE dia heverina ho toy ny:
"Tontolo iainana Desktop izay laorian'ny GNOME 2. Manome tontolo iainana mahaliana sy manintona amin'ny fampiasana ny fanoharana nentim-paharazana an'ny Linux sy ireo rafitra fiasa Unix hafa. MATE dia novolavolaina fatratra hanampiana fanohanana teknolojia vaovao, eo am-pitehirizana ny traikefa amin'ny birao mahazatra. ” Tranonkala ofisialy Mate
1 Ny momba ny MATE rehetra
Ny momba ny MATE rehetra
VADIKO navoaka tamin'ny daty 19 Aogositra 2011 ary ny anarany dia avy amin'ny yerba mate, karazana zanatany holly any amin'ny faritra tropikaly any Amerika atsimo.
Handeha ho an'ny 1.24 version (fampandrosoana ary 1.22 (stable).
VADIKO misy amin'ny alàlan'ny tahiry ofisialy amin'ny Distro GNU / Linux maro, toy ny: DEBIAN, Mint, Ubuntu ary Fedora.
Ny tontolo iainana ny fampiharana teratany an'ny VADIKO Izy io dia misy programa maromaro izay manana anarana tsy mitovy amin'ireo singa GNOME voalohany, hisorohana ny fifanolanana amin'ny fonosana. Ohatra: Box (File Manager), Pen (Text Editor), Eye of MATE (Image Viewer), ankoatry ny maro hafa.
Amin'ny fiandohany, VADIKO dia nifanaraka tamin'ny GTK + 2. Raha ny amin'ny version 1.12 dia mifanaraka amin'ny roa izy ireo GTK + 2 toy ny amin'ny GTK + 3.
tena maivana miaraka amin'ny fampiharana tsara sy fitoniana avo lenta.
Bika Aman 'endrika tradicional izay manamora ny fampiasana sy ny fanekena azy.
Mampifanaraka ny zanatany miaraka amin'ny rindranasa GNOME satria samy mampiasa GTK +.
Mety ho an'ny olona vao manomboka izay manomboka manomboka amin'ny tontolon'ny GNU / Linux ary / na manana fitaovana ambany loharano.
Izy io dia vitsy kokoa ny sarimiaina sy sary na sary raha ampitahaina amin'ny tontolo Desktop Desktop matanjaka toy ny KDE Plasma na Kanelina.
Ny haavon'ny fanaingoana azy dia heverin'ny maro tsotra sy tsotra loatra raha oharina amin'ireo tontolo Desktop mahery matanjaka kokoa toa ny KDE Plasma na Kanelina.
Fampiharana sy fanitarana zanatany vitsy kokoa raha oharina amin'ny tontolo Desktop matanjaka kokoa toa ny KDE Plasma na kanelina, saingy mitazona ny tombony amin'ny fampiasana rindranasa GNOME3 maro.
Tranonkala ofisialin'ny Tetikasa MATE
Aiza no ahafahanao mankany amin'ny Blog, Guides Installation, Fampahalalana momba ny fampandrosoana sy ny Community Community, ankoatry ny zavatra maro hafa. Ireto rohy manaraka ireto dia misy ihany koa ho fanampiana ny fampahalalana momba VADIKO:
Safidio ny Tontolo iainana Desktop MATE ary ny fitaovana hafa na ny fonosana fanampiny.
Fanamarihana: Azonao atao koa ny mametraka ny tontolon'ny Desktop miorina amin'ny MATE tsotra na feno amin'ny fanoloana ny fonosana mate ny mate-core o mate-desktop-environment. Afaka mameno azy amin'ny fonosana toy ny: mate-desktop-environment-extras y mate-tweak.
Famerenana indray ary fidio amin'ny fisafidianana ny Tontolo iainana Desktop VADIKO, raha toa ka manana mihoatra ny iray Tontolo iainana Desktop napetraka ary tsy nifidy ny Login Manager
Ary tsarovy, ity no lahatsoratra fahadimy amin'ny andiany iray momba Tontolo iainana Desktop GNU / Linux. Ireo teo aloha dia manodidina GNOME, KDE Plasma, XFCE y kanelina. Raha ny manaraka dia ho LXDE, ary farany LXQT.
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" momba ny «Entorno de Escritorio» fantatra amin'ny anarana hoe «MATE», izay heverina ho iray amin'ireo maivana indrindra ary miasa indrindra, toa XFCE, miaraka amina fomba nentim-paharazana sy karazana fampiharana zanatany, ao anatin'ny tontolon'ny «Distribuciones GNU/Linux», dia mahaliana sy mahasoa be, ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » MATE: Inona izany ary ahoana ny fametrahana azy amin'ny DEBIAN 10 sy MX-Linux 19?
Lahatsoratra iray tena feno toy ny mariky ny Linux Post Install